ब्रेकिङ्ग न्यूज | Birat Khabar
अपराध, फल्यास न्यूज, ब्रेकिङ्ग न्यूज, समाचार
सुनसरी । सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका-२ स्थितबाट नियन्त्रित लागुऔषध सहित १ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा सुनसरी बराहक्षेत्र नगरपालिका -२ का ३८ बर्षिय कालु बहादुर राई रहेका छन । हिजो बेलुका साँढे ५ बजे बिषेश सुचनाको आधारमा ईलाका प्रहरी कार्यालय चतराबाट खटिएको प्रहरी टोलिले राईको साथबाट डाइजेपाम ३१ एम्पुल, लुपिजेसिक, एम्पुल ३० एम्पुल, फेनारगन […]
विराटनगर । मोरङको रतुवामाईमा टिपरले ठक्कर दिँदा एक साइकल यात्रुको मृत्यु भए छ। आइतबार साँझ ५ बजे को १ ख ५११० नम्बरको टिपरले ओभरटेक गर्ने क्रममा ठक्करबाट साइकल यात्रुको मृत्यु भएको हो। टिपरको ठक्करबाट रतुवामाई नगरपालिका–४ कठघराका ५७ वर्षीय हरिराम गिरिको घटनास्थलमै मृत्यु भएको हो। मृत्युको घटनालाई लिएर आक्रोसित भएका स्थानियले टिपर तोडफोड गर्नुका साथै चालकलाई […]
सवारी दुर्घटना हुँदा १ जनाको मृत्यु १ जना घाईते
सुनसरी । सुनसरीको गढी गाँउपालिका-५ स्थितमा सवारी दुर्घटनामा परी १ जनाको मृत्यु भएको छ भने १ जना घाईते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा गढी गाँउपालिका-६ का २५ बर्षिय निराजन राय रहेका छन् । हिजो राती ८ बजे को ३ त ३९ नम्बरको ट्याक्टरको पछाडीको डालामा ठोक्किन गई ना ८ प ४३९० नम्बरको मोटरसाईकल दुर्घटना हुँदा मोटरसाईकल […]
मोरङ। मोरङको बिराटनगर महानगरपालिका-१७ मटेरुवा स्थितबाट मोटरसाईकल चोरीमा संलग्न १ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा सुनसरी रामधुनी नगरपालिका-३ घर भई बिराटनगर महानगरपालिका-११ मा डेरा गरी बस्ने २८ बर्षिय उमेश दाहाल रहेका छन् । मिति २०७८ मंसिर २६ गते राती साढे ८ बजे बिराटनगर स्थित कोशी अस्पतालको परिसरमा पर्किङ गरी राखेको को. २५ प ५०२४ […]
मोरङ । मोरङको बिराटनगर महानगरपालिका-१० बसपार्क स्थितबाट जागिर लगाई दिन्छु भनि ठगि गर्ने १ जनालाई पक्राउ गरिएको छ । पक्राउ पर्नेमा गोर्खाको लखन गाउँपालिका-२ का ३८ बर्षिय गणेशराज अर्याल रहेका छन् । अर्यालले उदयपुर त्रियुगा नगरपालिका-८ का उमेश कुमार दनुवार र प्रेम कुमार दनुवारबाट पटक-पटक गरी नगद रु. १ लाख ७३ हजार रकम ठगि गरेका […]
ईलाममा भेन दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु ८ घाईते
ईलाम। सुर्योदय नगरपालिका-७ सुखेपोखरी स्थित मेची राजमार्गमा मारुति भेन दुर्घटना हुँदा २ जनाको मृत्यु, ८ जना घाईते भएका छन् । हिजो दिँउसो साढे ३ बजे मे १ ज ३३०७ नम्बरको मारुति भेन आफै अनियन्त्रित भई सडकबाट १०० मिटर तल झरी दुर्घटना भएको थियो । घाईतेहरुलाई उपचारको लागि बि एण्ड सी अस्पताल बिर्तामोड लागिएकोमा माईजोमाई […]
छुरा प्रहारबाट सुनसरीमा १ जनाको मृत्यु
सुनसरी । छुरा प्रहारबाट सुनसरीमा १ जनाको मृत्यु भएको छ । सुनसरीको ईटहरी उप-महनगरपालिका-४ मा आफ्नै सालोले छुरा प्रहार गर्दा भिनाजुको मृत्यु भएको हो । मृत्यु हुनेमा ईटहरी-४ का ५१ बर्षिय श्री मुरारी गिरी रहेका छन् । हिजो बेलुका साढे ४ बजे गिरी कै घरमा बस्दै आएका सालो १९ बर्षिय अर्जुन राईले गिरीको छातिमा छुरा प्रहार गरेका थिए […]
बिराटनगर । सुनसरी र उदयपुरका दुई छुट्टाछुटै ठाँउमा सवारी दुर्घटनामा परि २ जनाको मृत्यु र १ जना घाईते भएका छन् । हिजो बेलुका साढे ३ बजे सुनसरीको कोशी गाँउपालिका(२ लौकहरी स्थित मधुबन सडक खण्डमा को २ त ९९६७ नम्बरको ट्रयाक्टरले को ३६ प ४०२७ नम्बरको मोटरसाईकललाई ठक्कर दिँदा स्थानिय ४० बर्षिय मनोज यादव घाईते भई […]
प्रकाशितः २२ मंसिर २०७८, बुधबार
काठमाडौं । कक्षा १२ पास गरेका विद्यार्थीहरुले अब प्रमाणपत्र लिनको लागि राष्ट्रिय परिक्षा बोर्ड धाउनु नपर्ने भएको छ । अब विद्यार्थीहरुले बोर्ड पुगेर निवेदन र दस्तुर बुझाएर प्रमाणपत्र लिनु नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले जानकारी दिएको छ । विद्यार्थीहरुले आफूले पढेको विद्यालयबाट प्रमाणपत्र लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्रिय परिक्षा बोर्डले गरेको छ । सम्बन्धित विद्यालयले […]
प्रकाशितः २१ मंसिर २०७८, मंगलवार
नेपालमा २ जनामा ओमेक्रोन भेरियन्ट देखा पर्यो
विराटनगर । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको नयाँ ओमेक्रोन भेरियन्ट सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले पुष्टि भएको छ । सोमबार स्वास्थ्य मन्त्रालयले आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहप्रवक्ता समीर अधिकारीले नेपालमा पिन ओमिक्रोन संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएका हुन् । एक जना ६६ वर्षीय विदेशी नागरिक र उनीसँग सम्पर्कमा रहेका ७१ वर्षीय नेपाली नागरिकमा यही मंसिर १९ गते ओमिक्रोन […]